Al Shabaab Oo ku Guuleystay Dhinaca Arrimaha Dibedda iyo Gudaha Xiritaanka Garoonka Diyaaradaha Muqdisho | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Al Shabaab Oo ku Guuleystay Dhinaca Arrimaha Dibedda iyo Gudaha Xiritaanka Garoonka Diyaaradaha Muqdisho	Oktoobar 12, 2008
11-10-2008 Dadka qaarkiisa ayaa u arkay xiritaanka garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo in laga qaado xayiraada kadib codsi odayaasha uga yimid inay guul daro iyo fashilaad ku timid Shabaab-ka. Laakiin Shabaabka ujeedadii ay ka lahaayeen xayiraada garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waa ku guuleysteen. Dhinaca arrimaha dibadda, Axmaduu Walad Cabdalla ayaa aduunka la wareegayay inuu ku guleystay inuu heshiis dhex dhigay labada qolo ee ku dagaalamayay Somaaliya inta kalena ay yihiin in yar oo argagaxiso canaasiir ah. Isagoo UN-ka isagoo arrimahaas la dhex fadhiya ayaa idaacadaha caalamka oo dhan laga maqlay in Abu Mansur Robow ku dhawaaqay xiritaanka Airaboorka Xamar.
Walad Cabdalla iyo labada koox oo uu hadba shiriyo TFG iyo ARS inaysan xabad joojin keeni karin ayay arrintaan cadaysa. Idaacadaha Reer Galbeedka oo Al Shabaab koox tiraya yar oo aan awood badnayn ku sifeyn jiray ayaa si ka duwan u soo tabiyay go’aankii Al Shabaab. In kastoo ay jiraan mujaahidiin badan oo kale oo muqaawamada ka tirsan haddana waxaa cad Al Shabaab inay ugu adag yihiin cadowga Somaaliya iyo Muslimiinta ee geeska Afrika sida ay Xisbullah u tahay kooxda ugu firfircoon la dagaalanka Isra’iil.
Dhinaca kale Al Shabaab dacaayad qorsheysan ayaa laga fidiyay oo lagu eedeynayo inaysan cidna la tashan, waxna maqlin. Somaalida dhexdeeda Al Shabaab guul weyn ayay gaareen markii uu Abu Mansur codsiya badan oo ka yimid dhinaca qaybaha kale ee Muqawaamada iyo odayaasha dhaqanka uu ku muujiyay dabacsanaan, naxariis iyo inay u dhaga nugul yihiin shacabka Somaaliyeed. Al Shabaab halkaa waxay ku muujiyeen sifadii mu’miniinta ee ahayd inay mum’miniinta dhexdooda isu naxariistaan kufaartana u daran yihiin.
( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)
Al Shabaab waxay caddeyeen oo kale in xalka Somaaliya aysan ku jiriin in dalka la keeno ciidamo shisheeye. Ugandha sida ay shacabka Muqdisho madaafiicada ugu garaacaysay ayaa qancisay reer Muqdisho in ciidamo shisheeye ee qaramada midoobay nabad soo kordhinayn.